फ्रिक स्ट्रिट नोस्टाल्जिया--सुरेश किरण
Raam Raam 1773 days ago
Visitor from US is reading फ्रिक स्ट्रिट नोस्टाल्जिया--सुरेश किरण
Visitor from SG is reading Your Best Nepali song, ever?
Posted on 01-21-17 6:03 AM Reply [Subscribe]
फ्रिक स्ट्रिट नोस्टाल्जिया
सुरेश किरण शनिवार, माघ ८, २०७३02186 पटक पढिएको
फ्रिक स्ट्रिट !
एकाएक अन्तर्राष्ट्रियकरण भइदिएको काठमाडौंको एउटा गल्ली, जहाँ म हुर्केँ । ‘झ्वःझ्वः छेँ’ अर्थात् लहरै घर भएको कारणले त्यो टोलको नामै झ्वःछेँ हुन पुग्यो । तर सन् १९६०–७० को दशकमा चलेको हिप्पिज्मको लहरले ‘झ्वःछेँ’को हाकुपटासी जबर्जस्ती उतारेर ‘फ्रिक स्ट्रिक’को मिनिस्कर्ट लगाइदियो । त्यसपछि विश्व बजारमा फ्रिक स्ट्रिटको अलग्गै पहिचान बन्यो ।
आजसम्म फ्रिक स्ट्रिटबारे धेरैले लेखिसकेका छन् । कति किताब पनि तयार छापिएका छन् । तर, ती लेखहरू या त फ्रिक स्ट्रिट पढेर लेखिएका छन्, या त फ्रिक स्ट्रिट सुनेर लेखिएका छन्, या त फ्रिक स्ट्रिट देखेर लेखिएका छन् । फ्रिक स्ट्रिट भोग्नेहरूको भोगाइ भने कतै पनि लिपिबद्ध भएको मैले पाएको छैन । यहाँ म भोगेको फ्रिक स्ट्रिट लेखिरहेछु ।
मेरो कुलघर काठमाडौंको पाको न्युरोड । बुबाले न्युरोडको घर बेचेर धेरै ठाउँ चहारेपछि बल्लबल्ल सन् १९७० को सुरुतिर ओमबहाल टोलमा एउटा सानो होटल चलाउनुभयो । डेरा पनि त्यहीँ थियो । ओमबहाल र न्युरोड पाँच मिनेटको बाटो हो । त्यति बेलासम्म वसन्तपुरको डबलीमा इँटा बिछ्याइएको थिएन । धुले नै थियो त्यो । एकपटक तिहारमा दाइहरूले त्यही माटोमा धँसेर रकेट उडाउँदा त्यो सँगैको गद्दी बैठकको झ्याल फोडेर भित्र छिरेको थियो । दाइहरू म सानो फुच्चेलाई त्यहीँ छोडेर कुलेलम ठोक्नुभयो, मचाहिँ त्यहीँ बसेर रोइरहेँ ।
वसन्तपुर क्षेत्र त्यति बेलै पर्यटकीय स्थल थियो । पुरातातात्तिवक महत्वका मल्लकालीन दरबार, थुप्रै मठमन्दिर अनि जीवित देवी कुमारी भएकाले । अहिलेको गुल्जार ठमेलमा त्यति बेलासम्म स्याल कराउँथ्यो । काठमाडौं घुम्न आउने मध्यमवर्गीय पर्यटकहरू वसन्तपुर वरिपरिकै विभिन्न लजमा बस्ने गर्थे । उनीहरू त्यही छेउछाउ खानेपिउने गर्थे ।
तिनै सानासाना लज र होटल रेस्टुरेन्टमध्ये केहीमा मजाले गाँजा पनि तान्न पाइन्थ्यो ।
झ्वःछेँ टोलमा हिप्पिज्म यही गाँजाको धुवाँसँगै फैलिएको थियो । त्यति बेला झ्वःछेँमा प्रचलित नशालु पदार्थमा गाँजाभन्दा पनि ह्यासिस प्रमुख थियो । कालो अलकत्राजस्तो ह्यासिस अर्थात् गाँजाको बोटमा टुप्पोलाई दुई हत्केलाले रगडेपछि बस्ने कालो मयल ।
त्यस्तो ह्यासिस झ्वःछेँभरि फालाफाल किन्न पाइन्थ्यो । झ्वःछेँ र वसन्तपुरबीचको त्यो फराकिलो गल्ली पूरै ह्यासिस बजार थियो । धेरैजसो ठाउँमा यहाँ ‘चिया पाइन्छ’ भनेर लेखिएजसरी नै ‘यहाँ ह्यासिस पाइन्छ’ भनेर साइनबोर्र्ड लेखेर टाँगिएको हुन्थ्यो ।
त्यति बेला युरोप अमेरिकातिर गाँजा प्रतिबन्धित थियो । तर, नेपालमा त्यसरी खुला बिक्री भइरहेको देखेर पर्यटकहरू वसन्तपुरको दरबारमात्र होइन खुला ह्यासिस बजार हेर्न पनि झ्वःछेँ आउने गर्थे ।
झ्वःछेँको ह्यासिस बजार आफैंमा एउटा अनौठो बजार थियो । ओमबहाल टोलमा ‘होटल इडन’ खोलिएपछि यो बजार अझ विस्तार भयो । होटल इडनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आयाम दिलायो । होटलका मालिक थिए, डीडी शर्मा (देवीदत्त शर्मा) । उनी ओमबहाल टोलमा आउँदा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको घरसामुन्ने रहेको एउटा पुरानो घरमा डेरा बसेका थिए ।
उनका दुई छोरी थिए । जेठीलाई टोलका ठिटाहरू ‘डम्फुचा’ भनी जिस्क्याउने गर्थे । सोही पुरानो घरमा बस्दाबस्दै डीडी शर्माले अलि पर ठूलो भवन बनाउन थाले । त्यो नौ तलाको भवन थियो । घर बनाउँदा छरछिमेकसँग अक्सर झगडा परिरहन्थ्यो । तत्कालीन काठमाडौंकै सबैभन्दा अग्लो उक्त भवनमा लिफ्ट पनि राखिएको थियो ।
ओमबहालका तत्कालीन ‘डन’हरू लिफ्टको मजा लिनकै लागि होटल इडन छिरिरहन्थे । म फुच्चे नै थिएँ । मेरा एकजना साथी थिए, राजाराम । उनको घरमा सेतो परेवा पालिराखेको थियो । हामी दुईजना ‘माथि छतमा हाम्रो परेवा बसेछ है, लिन जानुपर्‍यो’ भन्दै लिफ्ट चढेर माथि जान्थ्यौ) । र, पूरा काठमाडौंको दृश्यावलोकन गथ्र्यौं । फर्केर तल आउँदा होटलका कर्मचारीहरूले सोध्थे, ‘परेवा खोइ त ? ’ हामी जवाफ दिन्थ्यौं, ‘ढुंगा हानेको त उडेर गएछ ।’
अहिले साँझ पर्नेबित्तिकै भर्खरका युवकयुवतीका जोडीले फ्रिक स्ट्रिट उन्मादित हुन थाल्छ । फ्रिक स्ट्रिट आफ्नो काँधमा पुरानो विरासत बोकेर नयाँ कलेवरसहित रंगीन हुन थालेको छ । फ्रिक स्ट्रिट पुग्दा कतिलाई पुरानो हिप्पिज्मको सम्झना हुँदो हो । तर, मलाई भने पुरानो घाउ चहर्‍याइरहेको हुन्छ ।
‘होटल इडन’ ह्यासिसको ठूलो अखडा नै थियो । साथै होलसेलर पनि । झ्वःछेँका अरू खुद्रा ह्यासिस व्यापारीहरू थोकमा ह्यासिस किन्न त्यहीँ पुग्ने गर्थे । उक्त होटलको छतमा खोलिएको रेस्टुरेन्टमा ह्यासिसका चिया, कफीलगायत विभिन्न परिकार पाइन्थ्यो । उसले आफ्नो विज्ञापन गर्न ‘इडन ह्यासिस सेन्टर’ भनी लेखिएको पोस्टर नै बाँड्ने गथ्र्यो । कुनैकुनै पोस्टरमा क्यालेन्डर पनि हुन्थ्यो । त्यस्तो क्यालेन्डर ओमबहालका प्रायः सबै घरमा झुन्डिएका हुन्थे । हाम्रो पसलमा पनि झुन्डिएको थियो । त्यसमा ‘शुद्ध, असली ह्यासिसका लागि आफूलाई सम्झनुहोस्’ भन्ने सन्देशका साथै विभिन्न प्रकारका ह्यासिसको नाम पनि छापिएको हुन्थ्यो ।
बजारमा कमसल खालका ह्यासिसको पनि बिगबिगी थियो । त्यसैले ‘होटल इडन’को ह्यासिस सेन्टरले ‘नक्कली ह्यासिसबाट सावधान !’ भन्ने खालको सन्देश लेखिएका पम्प्लेटहरू पनि भित्ताभित्तामा टाँस्ने गरेको थियो ।
होटल इडनको आक्रामक पकडपछि ह्यासिस बजार ह्यासिसमा मात्र सीमित रहेन । त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै ब्राउन सुगरले पनि प्रवेश पाउन थाल्यो । यो नयाँ लागूपदार्थलाई ‘स्म्याक’ भनिन्थ्यो । स्म्याक दुई किसिमका हुन्थे- ह्वाइट सुगर र ब्राउन सुगर । ह्वाइट महँगो हुन्थ्यो, ब्राउन अलि सस्तो ।
बजारमा स्म्याकलाई स्थापित गराउन होटल इडनले पहिल्यै ह्यासिसको लत लागिसकेका ओमबहालका १०/१२ जना स्थानीय केटालाई निःशुल्क ह्वाइट सुगर वितरण सुरु गरेको थियो । उनीहरू यो लागूपदार्थको लतमा छुट्नै नसक्ने गरी फसेपछि स्म्याक बेच्न उनीहरूलाई नै प्रयोग गरियो । यसरी नेपाल भित्रिएको स्म्याकको पहिलो लटमै ‘गिनिपिग’ बनाइएका केही स्थानीय केटामध्ये मेरा दाजु पनि एक थिए ।
हामी तीन भाइ थियौं । म कान्छो । एक बहिनी । माहिलो दाइ प्रतिभाशाली थिए । उनी थांका लेख्न र छ्वालीको चित्र बनाउन निपुण थिए । तर, साथीभाइसँगै उनी पनि झ्वःछेँमा सुनियोजित रूपमै फैलाइएको लागूपदार्थको जञ्जालमा फस्न पुगे र दुव्र्यसनी बने । सुरुमा अरूजस्तै उनी पनि ह्यासिस राखिएको चुरोट खाने गर्थे । उनी कोठामा बस्दा पूरा घरै ह्यासिस गन्हाउँथ्यो ।
त्यसैले घरमा आमाबा उनलाई सधैं गाली गरिरहनुहुन्थ्यो । त्यसैले उनी अक्सर लुकीलुकी अथवा बाहिरै ह्यासिस खाने गर्थे । तर, स्म्याक आएपछि उनको खाने बानी, शैली र ठाउँ फरक हुन थाल्यो । अर्थात् उनी बाहिर होइन कोठामै बसेर स्म्याक खान थाले । त्यो खाँदा धुवाँ पनि नआउने, गन्ध पनि नहुने । उनले खाएको चीज के हो कसैलाई पनि थाहा थिएन । त्यसैले उनले ह्यासिस खाए भनेर गाली गर्नुहुने हाम्रा बाआमाले आफ्नैअगाडि स्म्याक तानिरहँदा पनि केही भन्नुहुन्थेन । बरु छोराले अब ह्यासिस खानचाहिँ छोडिसकेछ भनेर सन्तोष मान्नुहुन्थ्यो ।
दाइको अफिसियल नाम सुरेन्द्र भए पनि घरमा उनलाई सानु अर्थात् ‘सानुचा’ भनिन्थ्यो । छिटो बोलाउँदा ‘सान्चा’ हुन्थ्यो । साथीहरू पनि उनलाई सान्चा नै भन्थे । ओमबहालमा सान्चा दाइलगायत उनकै साथीहरू जोरगणेशतिर बस्ने ढालेचा, केशव, राम, चन्द्र आदि पहिलो लटका दुव्र्यसनी थिए । स्म्याक अर्कै खालको लागूपदार्थ थियो जो अरूभन्दा कैयौं गुणा खतरनाक हुन्छ भन्ने त्यति बेलासम्म कसैलाई थाहा थिएन ।
दाइ त्यो दुर्व्यसनमा लागेपछि घरबाट सामानहरू धमाधम गायब हुन थाले । सुरुमा आमाको पूजाका सामानहरू, कांसको थाल, सुकुन्दा आदि सामान हराउन थाले । पछि आमाका साडीहरू गायब हुन थाले । त्यसपछि मात्रै थाहा भयो, घरबाट यी सबै सामान चोर्ने चोर त अरू कोही नभएर आफ्नै माहिलो छोरो पो रहेछ । त्यसपछि बल्ल थाहा भयो, माहिलो दाइलाई त्यसरी घरकै सामान चोर्न बाध्य तुल्याउने त्यो खराब तत्व स्म्याक रहेछ । यो त ह्यासिसभन्दा खतरनाक पनि हुने रहेछ !
दाइको खराब बानीबारे घरले थाहा पाउँदा निकै ढिलो भइसकेको थियो । दाइ त्यो जालमा उम्किनै नसकिने गरी फसिसकेका थिए । त्यसपछि हाम्रो घर नर्कमा बदलियो । एउटा परिवारलाई सिंगै तहसनहस पार्न त्यो घरमा एउटा दुव्र्यसनी जन्माइदिए पुग्दो रहेछ । स्म्याक किन्न दाइले घरमा चोरी गर्ने, पैसाका लागि झगडा गर्न सुरु गरेपछि आफ्नै सदस्यबाट परिवार र घर असुरक्षित हुन थाल्यो । घरमा सानोभन्दा सानो सामानसम्म पनि खुला छोड्न नसकिने भयो । यहाँसम्म कि दाइले मेरो पढाइका लागि चाहिने एउटा अंग्रेजी डिक्सनरीसमेत बेचेर आफ्नो लत मेटाए ।
त्यति बेला उनी गोरखापत्र संस्थानमा जागिरे थिए । राम्रो चित्र बनाउने भएकाले गोरखापत्रका कला प्रमुख एवं प्रख्यात चित्रकार शंकरराजसिं सुवालले उनलाई जागिर लगाइदिनुभएको थियो । शंकरराज उनलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्थ्यो । उनैले एकचोटि दाइलाई एक महिनाका लागि भारतको कलकत्तामा तालिम लिन पठाउनुभएको थियो । कलकत्ता जाँदा पनि दाइले आफूलाई चाहिने स्म्याक यहीँबाट बोकेर लगेका थिए । तर आफूले लगेको स्म्याक एक महिनालाई नपुग्ने भएपछि दाइ तालिम बीचैमा छोडेर फर्के ।
एकपटक गोरखापत्र संस्थानको गेटमा दाइ समातिए । उनी संस्थानको सामान चोरेर निस्कँदै गर्दा समातिएका रहेछन् । हिसाबले उनी कारबाहीमा परी बर्खास्त हुनुपर्ने थियो । तर, उनै शंकरराजले बीचको बाटो निकाली राजीनामा गर्न लगाउनुभयो । त्यति बेलासम्म उनी पूरै जंकी बनिसकेका थिए । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै बिनाइन्जेक्सन बाँच्नसक्ने अवस्थामा उनी थिएनन् । इन्जेक्सन नलिए शरीर एकदम कामेर उत्पातै मच्चाउँथ्यो । नाडीमा प्वालै प्वाल थियो । नाडीमा इन्जेक्सन हान्ने ठाउँ नभएर उनी खुट्टामा नशा खोज्दै सुई लाउने गर्थे ।
त्यसपछि हामी ओमबहालको फ्रिक स्ट्रिट छोडेर बत्तीसपुतलीको आफ्नै घरमा सर्‍यौं । त्यहाँ सरेको केही वर्ष दाइ सुध्रिएका पनि थिए । पछि फेरि पुरानै बाटोमा लागे । उनको कारणले घरमात्र होइन बत्तीसपुतलीको त्यो राम मन्दिर क्षेत्र पूरै तनावग्रस्त बनिसकेको थियो । पछि थाहा भयो, उनकै संगतमा लागेर राम मन्दिर छेउछाउका समेत कतिपय युवा लागूपदार्थको नशामा फसिसकेका रहेछन् ।
घरमा कुनै न कुनै युवाका आमाबा गुनासो लिएर सधैंजसो आइरहेका हुन्थे । तर, हामीसँग गुनासो सुनेर चुपचाप बस्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन । कतिपटक उनले आमालाई समेत खुकुरी प्रहार गरे । उनीबाट हामी आफैं त सुरक्षित थिएनौं, अरूका विषयमा के सोच्नु !
हामीले भोगेको हिप्पिज्म किताबमा बयान गरिने स्वतन्त्रताको उन्मादमात्र थिएन । त्यहाँ गिन्सबर्गको आवेगयुक्त कवितामात्र थिएन । त्यहाँ भियतनाम युद्धको विरुद्धमा उठेको आक्रोशमात्र थिएन, त्यहाँ त परिवार र समाज विघटनको चिसो स्याँठ थियो । मृत्युको अँध्यारो बाटोमा डोर्‍याउने कुलत थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा समाजमा आर्थिक विघटनले सिर्जेको निराशाबाट भागेका हिप्पीहरूको तथाकथित फ्रिडमको निरीह सिकार थिए मेरो दाजु; जो नेपाली समाजमा लागूको बिक्री गर्ने स्वार्थ समूहको पहिलो लटको गिनिपिग भए; जो आफ्नो क्षमता, सिर्जनशीलता र प्रतिभालाई स्म्याकको कुलतमा सक्न बाध्य भए; जसले समाजमा अपरिचित सन्त्रास हुले । आफू विक्षिप्त बाँचे र निरीह मृत्यु मरे ।
एक दिन दाजु कोठामा मृत भेटिए । दिउँसो कोठा छिरेका दाजु भोलिपल्टसमेत ननिस्केपछि हामीले जबर्जस्ती झ्याल खोलेर हेर्दा उनलाई ढोकैमा घोप्टिरहेको अवस्थामा पायौं । हलचल नगरेपछि प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं । प्रहरीले झ्यालको रेलिङ झिकेर भित्र पसी हेर्दा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । इन्जेक्सन हान्न खोज्दा खाली सिरिन्जबाटै सुई लगाएकाले उनको मृत्यु भएको रहेछ । वीर अस्पतालमा डाक्टर नपाएर तीन दिनपछि मात्रै पोस्टमार्टम हुन सक्यो । चौथो दिनमा अन्तिम संस्कार भयो ।
उनको मृत्युपछि बल्ल हामीले घरमा आल्मुनियम र प्लास्टिकका भाँडाकुँडा हटाएर स्टिलको थालमा खान सुरु गर्‍यौं । उनको मृत्युको केही वर्षपछि मैले थाहा पाएँ— उनका जंकी साथीहरू ढालेचा र केशवको पनि मृत्यु भइसकेछ ।
दाइले स्म्याक सुरु गरेकै ताका नेपालमा ह्यासिसमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले नेपाल सरकारलाई सीधै दबाब दिएर ह्यासिसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने पढेको छु । ह्यासिसमा प्रतिबन्ध लाग्नेबित्तिकै प्रहरीले होटल इडनमा छापा मार्‍यो । त्यसका मालिक डीडी शर्मा भागेर भारतको बम्बई पुगे । इडन भने महिनौंसम्म प्रहरी निगरानीमा रह्यो ।
त्यो प्रतिबन्धपछि फ्रिक स्ट्रिटका जम्मै ह्यासिस सेन्टरहरूको साइनबोर्ड उतारियो । लागूऔषधको कारोबार गर्नेहरू समातिन थाले । केही समय फ्रिक स्ट्रिटमा साइनबोर्डबिनाका ह्यासिस सेन्टरहरू चली नै रहे । प्रहरी जवानहरू नै समातिएका जंकीहरूबाट बरामद भएका स्म्याक वसन्तपुरमा ल्याएर बेचिरहेका हुन्थे । प्रहरीको कडा निगरानीपछि त्यो पनि क्रमशः बन्द हुँदै गयो ।
ह्यासिस सेन्टरहरू बन्द भए पनि संसारभर फैलिएको फ्रिक स्ट्रिट र खुला ह्यासिस बजारको चर्चा भने बन्द भएन । हिप्पी जीवनमा रमाउने संसारका थुप्रै सेलिब्रेटीसमेत फ्रिक स्ट्रिट घुम्न आएको चर्चा सुनिन्छ । त्यही हिप्पी जीवनमा आधारित भएर बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता देव आनन्दले ‘हरे राम हरे कृष्ण’ फिल्म बनाएका थिए जसको अधिकांश सुटिङ यहीँ भएको थियो ।
फ्रिक स्ट्रिटको ठीक चौबाटोमा एउटा अग्लो घर छ । जसको एउटा कुनामा ‘हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे’ भन्ने श्लोक लेखिएको छ । त्यो घर र श्लोक अहिले पनि त्यहीँ छ । देव आनन्द स्पट हन्टमा आएका बेला उक्त घरमा लेखिएको त्यो श्लोक एकछिन रोकेर पढे । पछि उनले त्यही श्लोकबाट आफ्नो फिल्मको नाम नै ‘हरे राम हरे कृष्ण’ राखे । काष्ठमण्डपमा उक्त फिल्मको सुटिङ अक्सर राति हुने गथ्र्यो । मेरो ठूलो दाजु पसल छोडेर भागीभागी सुटिङ हेर्न गइरहन्थे ।
त्यति बेला वसन्तपुरमा हरेकजसो बिहान हिप्पीहरू पसल थापिरहेका देख्न पाइन्थ्यो । त्यो उनीहरूको आफ्नै सामान बेच्ने पसल थियो । उनीहरू आफ्नो देशबाट लगाएर आएको जिन्स ज्याकेट, पाइन्टजस्ता लुगाफाटा जम्मै फुकालेर बेच्थे र फ्रिक स्ट्रिटका पसलहरूमा बेच्न राखिएका हिप्पी शैलीका कपडा किनेर लगाउने गर्थे । त्यति बेला फ्रिक स्ट्रिट पूरैजसो त्यस्तै पसलहरूले भरिएको हुन्थ्यो । र, पसलमा बस्ने अधबैंसे साउजी÷साउनीहरूसमेत कनिकुथी अंग्रेजी बोल्थे ।
फ्रिक स्ट्रिट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रचलित नाम हो । तर, फ्रिक स्ट्रिटका स्थानीय रैथानेहरूलाई भने आफ्नो झ्वःछेँ–ओमबहाल टोलको नाम फेरिएर फ्रिक स्ट्रिट बनेको पत्तै छैन । अझै पनि यहाँका पुराना बूढापाकालाई आफ्नो घर त्यही ऐतिहासिक ‘फ्रिक स्ट्रिट टोल’मा पर्छ भन्ने थाहा छैन । त्यसो त अहिले फ्रिक स्ट्रिटमा त्यो ‘फ्रिक स्ट्रिट’ छैन ।
तथापि त्यसको मगमग भने त्यहाँ अझ पनि सुँघ्न सकिन्छ । कुनै बेला जंकी र हिप्पीहरूले भरिने फ्रिक स्ट्रिटले अहिले आफ्नो रूप फेरिसकेको छ । अहिले साँझ पर्नेबित्तिकै भर्खरका युवकयुवतीका जोडीले फ्रिक स्ट्रिट उन्मादित हुन थाल्छ । फ्रिक स्ट्रिट आफ्नो काँधमा पुरानो विरासत बोकेर नयाँ कलेवरसहित रंगीन हुन थालेको छ । फ्रिक स्ट्रिट पुग्दा कतिलाई पुरानो हिप्पिज्मको सम्झना हुँदो हो । तर मलाई भने पुरानो घाउ चहर्‍याइरहेको हुन्छ ।
Posted on 01-21-17 8:16 PM [Snapshot: 182] Reply [Subscribe]